Izimakethe ze-JP - umthengisi omkhulu we-forex wase-Afrika
Qala Ukuhweba Manje
Faka isicelo se-JPM Card
Isingeniso ku-Training Forex
Umlando omfushane weMakethe Forex
Kungani i-Market Forex, futhi engekho amasheya noma abanye?
Yini ehwetshwe futhi kanjani?
Usayizi weMakethe nokwehla
Izindlela Ezihlukahlukene Ezokuhweba Forex
Isikhathi esihle sokuhweba nini?
Yiziphi izibili zokuthengisa?
Imali Yenziwe Kanjani Emakethe Ye-Forex
Indlela Yokufunda Ishadi Lokubikezela - izinto eziyisisekelo
Imigomo ebalulekile ye-Forex
Yehlisa ukuLinda kokungena
I-akhawunti ye-Akhawunti vs i-Akhawunti Yokuphila
Imisebenzi eyisisekelo ye-MetaTrader ye-4
Ukuthola amazinga wamanani abalulekile
Ukufakela Amakhandlela Okudumile
Ishidi lokukhohlisa lamakhandlela - Phrinta lokhu
Iyini i-Elliott Wave futhi iyasiza kanjani?
I-5-3 Wave Pattern - Iyini nokuthi ingayithola kanjani
Izinhlobo Ezintathu Eziyisisekelo Zokuhlelwa Kwama-Wave Wokulungisa
I-Great Super Cycle - Ama-Waves ngaphakathi kwamagagasi ngaphakathi kwamagagasi
Ukusebenzisa lokhu ku-Trading Forex yakho
Amanye ama-Elements of Risk
Ukulawulwa Kwengozi YamaDummies
Umlando weMakethe ye-Forex
Ukuhweba Forex kusebenza kanjani?
Yimaphi amathonya okuthenga nokuthengisa?
I-Glossary ye-Forex (Foreign Exchange) Terminology
Ikhalenda ye-Economic Forex
Iyini idiphozi encane?
Kungakanani amaMakethi we-JP akhokhisa ukuqeqeshwa?
Yimiphi imibhalo edingekayo ukuvula i-akhawunti?
Angitholi i-imeyili egameni lami - yini engingayithumela njengobufakazi bekheli?
Ngisanda kuzama ukungena futhi ithi ukungena ngemvume okungalungile / iphasiwedi / akukho uxhumano
Ngikhokhela kanjani i-akhawunti yami yokuhweba?
Ngingakhokhela i-akhawunti yami ngisebenzisa i-Bitcoins?
Ngikuphi okumele ngikusebenzise lapho ngenza idiphozi?
Iyiphi isikhathi sokuguqula idiphozi yami eyabelwe futhi iboniswe ku-akhawunti yami?
Idiphozi yami ayizange ibonakale ku-akhawunti yami - iyini inkinga?
Ngisanda kulandwa i-MT4, kungani ngingakwazi ukubeka noma yikuphi ukuhweba?
Ngikhohlwe iphasiwedi yami ye-portal iklayenti.
Ngikhohlwe iphasiwedi yami yesikhulumi sami sokuhweba.
Ngicela kanjani ukuhoxiswa?
Iyini isikhathi sokuguqula ukuhoxiswa?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuhoxiswa ukubonisa?
Ngingakwazi yini ukuhoxisa ibhonasi?
Ingabe izimakethe ze-JP zilawula ukusabalala / ipulatifomu?
Ukuphelelwa yisikhathi kwe-oda okulindile
Ingabe iMakethe ye-JP inikezela amaklayenti izimpawu?
Ingabe izimakethe ze-JP zithengela ngemali kaMandela?
Ngingaba kanjani i-Introducing Broker (IB)?
Yiziphi izinhlobo ezahlukene ze-akhawunti eyenziwa ngamaMakethe we-JP?
Uyini umehluko phakathi kwe-ECN nama-Standard Standard?
Kungakanani ukuthunyelwa kwe-akhawunti ye-ECN?
Kungani ukulahlekelwa kwami ​​ukuyeka / ukuthatha inzuzo hhayi ukushaya?
AmaMakethe e-JP enza kanjani imali uma unikeza izifundo zamahhala namakhasimende akho "azuzisa"?
Ubani olawula izimakethe ze-JP?
Ngingakanani imali engingayenza uma ngifaka i-X lemali?
Ngifuna ukuqala ukuhweba kodwa angazi kanjani?
Ingabe kufanele ngikhokhele amamaki a-JP ngezinsizakalo zabo ngaphandle kokutshala imali yami?
Ingabe amaMakethe e-JP angahweba ngami?
Ingabe izimakethe ze-JP zenza noma yiziphi izinkokhelo zentela ngemali engikwenzayo / ihoxise?
Ingabe imali yami iphephile?
Ngena ngemvume Partner Register
ISIQONDISO SOKUKHULA SOKUQALA
Sifuna uphumelele. Ngakho sinikeza
wena wonke amathuluzi okudingayo ukwenza kanjalo.
Okusheshayo, amasheya athembekile kanye nokuhoxiswa.
Azikho izinkathi zokulinda isikhathi eside.
Ukuphepha kuyinto yokuqala ebaluleke kakhulu.
Imali yakho iphephile futhi iphephile.
Imali ye-Zero yediphozithi yasebhange noma ehoxisiwe
yenziwe ngamasango ethu okukhokha.
Imakethe ye-JP - Umthengisi omkhulu we-forex waseNingizimu Afrika kanye ne-Africa
Izimakethe ze-JP iyinhlangano ye-Forex yamandla jikelele. Sibeka amazinga aphezulu ezinsizakalo zethu ngoba ikhwalithi injengeyomnqopho kithi njengamaklayenti ethu. Sikholelwa ukuthi izinsizakalo zezezimali ezihlukahlukene zidinga ukuguquguquka ekucabangeni kanye nenqubomgomo ehlanganisiwe yezimiso zebhizinisi. Siyaqhubeka sikhula nsuku zonke sibonga ngokuzethemba kwamakhasimende ethu kithi. Sinelayisense futhi silawulwa yiBhodi Yezinkonzo Zezezimali, eNingizimu Afrika, i-FSP 46855.
Ngokusetshenziswa kokuqapha okuzenzekelayo nokuphathwa kwengozi, i-akhawunti yomthengi ngeke ivumeleke ukuthi ifinyelele ibhalansi engalungile.
Imali yeZero ngoba
sifuna ukuthi uphumelele
Asinakhokhisi noma yiziphi izimali zamabhondi asebhange noma ukuhoxiswa okwenziwe ngokusebenzisa izindlela zokukhokha. Singumdayisi ongcono kakhulu, onokwethenjelwa & othembekile we-Afrika.
Ngokushesha nokwanele amapulatifomu okuhweba
Njengoba ubuchwepheshe obuphezulu nobuchwepheshe, amapulatifomu ethu ashesha futhi anele ukuhweba kwakho. Asilaki futhi asiphindi kabusha kuma-oda. Okufunayo ukuthi uthole.
idiphozi & ukuhoxiswa
With deposit yethu esheshayo kanye nobuchwepheshe obuseduze bokukhipha imali. Ungayithokozela impumelelo yakho cishe ngaso leso sikhathi. Azikho izinkathi zokulinda isikhathi eside.
Isimo sokuphepha kobuciko
Ukuphepha kuyinto yokuqala ebaluleke kakhulu. Izimali zakho zihlale ziphephile nathi futhi zigcinwe ku-akhawunti ehlukile yebhange njengoba kucelwe umlawuli wethu. Imali yakho iphephile futhi iphephile.
Ukwesekwa kwamakhasimende, esinye sezikhundla zethu ezibaluleke kakhulu - ukuthi yini eyenza sihluke. Shayela, i-imeyili noma Xoxa nathi namhlanje. Ababonisi bethu bayakujabulela ukukusiza nganoma yisiphi isicelo.
Bona wonke amabhulogi ebhulogi
Ngiyakubonga futhi ngiphendule kuwe emakilasini okuqeqesha nokuqeqesha, ngiye ngathola kumaMakethe aJP. Bangisize ngempela ukufunda nokuthuthukisa amakhono ami okuhweba. Ngibheka emuva emlandweni wami wokuhweba Ngikhubekile futhi ngawa kaningi ngingazi ukuthi empeleni ngangingazi lutho mayelana nemakethe ngokwayo nokuthi ngiyabonga futhi ngihloniphekile ngokuhweba nomdayisi wakho futhi ngilangazelela ukuhwebelana namaMakethe e-JP . Izifiso zami ziye zahlangana nenkampani yakho.
Usuku oluhle, Ukuqeqeshwa engangikuthole kwakungcono kakhulu, nakuba ngiye ngakwazi ukuhamba izinsuku ezingu-2 kusukela ngihlala kude kakhulu. Kodwa ngezikhathi zokuqeqeshwa kwe-JP ezimakethe ze-intanethi ngingakwazi ukufunda. Ngamanje ngisebenzisa amasu afundwa kwi-demo. Ngokushesha ngizokwenza imali yami.
Anginakho lutho kodwa izinto ezinhle okumele zisho kusukela i-akhawunti yami ibe ne-JP Markets. Baye bangisekela njalo ngazo zonke izikhathi zosuku. Izimakethe ze-JP zinikeza iseluleko esihle kakhulu se-forex futhi "sazi ukuthi" kanjani umdlalo yizinga eliphezulu. Angikaze ngisebenze nenkampani evumelana kakhulu. Ngiyazisa ngempela lonke usizo engilutholayo.
Usuku oluhle, ngingathanda ukuthatha leli thuba ukubonga abasebenzi bamaMakethe eMisebenzi emihle. Ngomuntu onjengaye owayengenasici ekuhwebeni, ngiyabonga ngokugcina ngiphefumulelwe futhi ngishukumisekile. Qhubeka nomsebenzi omuhle!
Ngaqala ukuhwebelana namaMakethe we-JP ngonyaka odlule futhi angingenalo ulwazi oluningi. Lo nyaka ngiphinde ngifaka futhi ngithokozela ukuhweba. Lapho ngikhipha izimali ezivela kumakethemende e-JP, ngithola imali yami ngosuku olufanayo futhi yilokho okubenza bahluke kumncintiswaneni wabo. Uma ngifaka imali, izimakethe ze-JP zidlulisela imali ku-akhawunti yami yasebhange zingakapheli amahora. Ngiyakuthanda iMakethe ye-JP futhi mina ngithumele abangane bami abane ukuba badayise endaweni yabo yesikhulumi.
Ngiyajabula kakhulu ngokuqeqesha engikutholile. Kwathuthukisa ukuqonda kwami ​​okuwusizo kokuhweba kwe-Forex futhi ngazizwa ngiqiniseka futhi ngithule ngisebenzisa lokho engikufundile. Insizakalo engayithola yayingcweti kakhulu futhi ukukhulumisana njalo kuyakhuthaza ngoba kungenza ngizizwe ekhaya futhi ngakha ithemba lami kumaMakethe aseJP njengenkampani. Imakethe ye-JP iyamamukela futhi abasebenzi bayo bazikhethele kakhulu futhi ezinye zezinsizakalo ensimini. Insizakalo engayithola evela ehhovisi lase-Back office yayiphuthumayo futhi iyasebenza. Ukuhoxiswa nokukhokha kubonakala ngokushesha. Ngathola ithuba lokuxoxa noMphathi Omkhulu we-Justin ngokwakhe futhi kwakukuhle. Ungumuntu othobekile kakhulu ngempela. UNkulunkulu abusisa izimakethe ze-JP nombono walo futhi uNkulunkulu abusise i-Afrika.
Ukuhwebelana Kwangaphandle Kwezezimali (Forex) kanye Nezinkontileka Zokuhlukahluka (CFD) kuhloswe kakhulu, kuthwala izinga eliphakeme lomngcipheko futhi angeke lifanele bonke abatshalizimali. Ungase ugcine ukulahlekelwa kweminye noma yonke imali yakho etshaliwe, ngakho-ke, akufanele ucacise ngemali engenakukwazi ukuyilahleka. Kufanele uqaphele zonke izingozi ezihlobene nokuhweba emkhakheni.
I-Copyright 2019 JP iMakethe SA
Sinelayisense futhi silawulwa yiBhodi Yezinkonzo Zezezimali, eNingizimu Afrika, i-FSP 46855
ENelson Mandela Square, eMgwaqweni uMawude
I-West tower Floor 2
© 2019 Izimakethe ze-JP | | Wonke Amalungelo Agodliwe | Idalwe ngu: I-Lab Lamp Lamp